एसिडिटी वा पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने, यसरी अपनाउनुहो घरेलु उपचार बिधि !
काठमाडौ : खाना अरुची हुने, पेट दुख्ने , पेट ढु’स्स भएर फुल्ने जस्ता स’मस्यामा धेरैले सामान्य स’मस्याको रुपमा लिदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा पेटमा ग्यास भरिने र एसि’डिटीको रोगबाट धेरै मानिसहरु पि’डित भएका छन् । समयमै उक्त सम’स्यालाई समधान गर्नको लागी सामान्य प्रयासबाट छुटकारा पाउन सकिएपनि सुरुको अवस्थामा ध्यान नदिने अंधिकाशको बानीले रोग झन् थपिदै गएको छ ।
ए’सिडिटी हुनको कारण भनेको आमाशयमा एसि’डको उत्पादन बढि हुनु हो । यसबाट खानेकुरा राम्ररी नपची रस ए’सिडमा बदलिन्छ र एसि’डिटी हुन्छ । यस्तो अत्याधिक अमिलो, पिरो, मसले’दार खानेकुरा, चिया, कफि, मदिरा, धु’म्रपान सेवन गर्नाले हुन्छ ।
यदि लामो समयसम्म एसि’डिडी भइरह्यो भने अम्ल’पित्त लगायतका अन्य रोग लाग्दछ । एसि’डिटी भएपछि पेट पोल्ने, अमिलो डगार वा मुखबाट अमिलो पानी आउने हुन्छ । जसको कारण अपच, क’ब्जियत वा पखला पनि हुन्छ ।
विशेषगरी पाचनसम्बन्धीत गडबढीको कारण पेटमा ग्यास भरिने गर्दछ । यस्तो हुनुलाई कुनै रोगको लक्षणको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । यो समस्या पछिल्लो समयमा एक आम समस्याको भएको छ । व्यस्थ र अवस्थकर जीवनशैलीमा रहेका मानिसहरु
गलत खानपान, अनियमितता खानपान गर्ने कारण उनीहरुलाई यस्तो समस्या अधिक हुने गर्दछ । जसको कारण भो’क नलाग्ने, पेटमा हावा भरिने वा पि’ठ्युमा हल्का पि’डा हुने गर्दछ । त्यस्तै अत्याधिक धुम्र’पान वा मद्य’पान, चिया, कफि तना’व, चि’न्ता लिदां पनि यस्तो हुन्छ ।
कसरी छु’टकारा पाउने ?
१. बोक्रा सहितको आटाको रोटी खानाले पनि ए’सिडिटी तथा ग्यासको समस्या बिस्तारै समधान हुन्छ । त्यसैगरी ज्वानो, जिरा, वीरे नुन, लसुन मिलाएर चपाउन पनि ठिक हुन्छ ।
२. करिब एक चच्चा जति ज्वा’नोलाई लिएर त्यसमा एक चौथाई कागतीको रस निचोरी मिसाई पिउने ।
३. लसुनको पोटी दैनिक रुपमा खाली पेटमा सेवन गर्ने ।
४.करिब एक गिलास जति उखुको रस लिनुहोस् र त्यसलाई तातो बनाइ कागतीको रस र सिरे नुन मिसाएर दैनिक रुपमा बिहान र बेलुका एक गिलास सेवन गरेमा ग्यासको समस्या हटेर जान्छ ।
५.एसि’डिटीको समस्याको लागी अदुवाको रसमा थोरै नुन हालेर त्यसमा जिरा भुटेर मिसाई सेवन गरेर एक गिलास जति मोहि सेवन गरेमा समस्या समधान हुन्छ ।
६. त्यस्तै करिब १० देखि २० मि.लि घिउँकुमारीको रस दैनिक रुपमा सेवन पनि सकिनेछ । -विगुल न्युज
२०७८ बैशाख १०, शुक्रबार ०५:३५ गते 1 Minute 1135 Views